သင်တို့ မသိသေးသော တစ်ချိန်က အောင်မြင်ကျော်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင်စူပါစတား ကိုသားကြီး (ခ) ဒွေး အကြောင်း ...! - APANNPYAY
Home / သရုပ်ဆောင်များ / သင်တို့ မသိသေးသော တစ်ချိန်က အောင်မြင်ကျော်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင်စူပါစတား ကိုသားကြီး (ခ) ဒွေး အကြောင်း ...!
သင်တို့ မသိသေးသော တစ်ချိန်က အောင်မြင်ကျော်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင်စူပါစတား ကိုသားကြီး (ခ) ဒွေး အကြောင်း ...!
ဒွေးသည် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော် တစ်ဦးအဖြစ် ပရိသတ်အသိအမှတ်ပြု ခံရသူဖြစ်သည်။ ဒွေးကို အဖ ဦးတင်ထွန်းမောင်နှင့် အမိ ဒေါ်အေးအေးသင်းတို့ ရန်ကုန်မြို့တွင် မွေးဖွားပြီး မွေးချင်းများအနက် သားဦး ဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ ထင်လင်း (ခ) သားကြီး ဖြစ်သည်။ ထင်လင်း (ခေါ်) ဒွေးသည် Y.I.T မှ အင်ဂျီနီယာဘွဲ့ရထားသူ တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက် ဖြစ်သော ဒွေးသည် ဘွဲ့မရခင်ကတည်းက အနုပညာလောကထဲသို့ စတင်အခြေချခဲ့သည်။ သရုပ်ဆောင်လောကထဲသို့ မဝင်မီက အဆိုတော် ဖြစ်ချင်ခဲ့ပါသည်။ မမျှော်လင့်ပဲ ဦးလေးဖြစ်သူ ဦးကျော်ဟိန်းကြောင့် ရုပ်ရှင်ရိုက် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ရုပ်ရှင်လောကထဲကို နာမည်ရင်း ထင်လင်းအမည်နှင့် ပထမဆုံး ဝင်ရိုက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဒွေးအမည်သို့ပြောင်းကာ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် ဒါရိုက်တာ ကျော်ဟိန်း၏ ဒုက္ခကို အရောင်ဆိုးတယ် အမည်ရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးပညာပေး ဗီဒီယိုကားနှင့် ဝေလည်းမွှေး၊ ကြွေလည်းမွှေး ရုပ်ရှင်ကားမှာ ပရိတ်သတ်အသိများပြီး စတင်အောင်မြင်ခဲ့သည်။
ဒွေးသည် မပပဝင်း (ခ) မမိုးမိုးနှင့် အိမ်ထောင်ကျသည်။
ဒွေးသည် ဦးလေးဖြစ်သူ အကယ်ဒမီ ကျော်ဟိန်း၏ လမ်းညွှန် ဆွဲခေါ်မှုကြောင့် ရုပ်ရှင်လောကထဲမှာ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ဗီဒီယိုကားပေါင်းများစွာနှင့် ရုပ်ရှင်ကားပေါင်းများစွာ ရိုက်ကူးခဲ့သော စူပါမင်းသား တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒွေးသည် ၁၉၉၇-ခုနှစ်တွင် အမေ့ခြေရာဇာတ်ကားတွင် အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု အကယ်ဒမီရရှိခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်ကြီးပေါင်းများစွာ၊ ဗီဒီယို ကားပေါင်းများစွာ၊ ကြော်ငြာများကိုလည်း ရိုက်ကူးခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ရုပ်ရှင်လောကတွင် လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်ခဲ့သလို င်္ဂီတလောကတွင်လည်း အောင်မြင်နေသူ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သီချင်းပါင်း အပုဒ် ၃၀ကျော် ကို သီဆိုခဲ့သည်။
ဒွေးကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာအဖြစ် နောက်ဆုံးရိုက်ကူးခဲ့သောကားမှာ `နှင်းဆီမိုးတိမ်´ဖြစ်သည်။
အောင်မြင်နေချိန်တွင် အကယ်ဒမီ ဒွေးသည် မမျှော်လင့်ဘဲ နှလုံးရောဂါနှင့် ၂၀၀၇ခု၊ ဇူလိုင် ၁၁ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) တွင် ညနေ (၅) နာရီ၌၊အမှတ် (၃၄) (စီ)၊ အေးသာယာလမ်း၊ ဘောက်ထော် နေအိမ်တွင် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့လေသည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ဒွေးသည် အသက် (၄၂) နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။
၁၈ နှစ်ကြာပေါင်းသင်းခဲ့သော ချစ်လှစွာသောဇနီးသည် မိုးမိုးနှင့် မွေးစားသား ဝေယံမိုးတို့ကို ထားခဲ့ပြီး မပြန်လာနိုင်တော့တဲ့ လမ်းကိုစောစီးစွာ လျှောက်လှမ်းသွားခဲ့သည်။ ဇူလိုင်လ (၁၀) ရက်နေ့ မှာကျရောက်တဲ့ ဇနီးသည် မမိုးမိုး၏ မွေးနေ့အပြီး နောက်တစ်ရက်တွင် သေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ၏ချစ်ဇနီး မိုးမိုး၏မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ဘယ်တော့မှမသေတဲ့ အချစ်သစ်ပင်လေးနှင့် ဘီဒိုသုံးလုံးကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ မကွယ်လွန်မီ တစ်ရက်က တစ်နေ့လုံးကားရိုက်ပြီး ညဘက်ပြန်ရောက်တဲ့ အခါမှာလည်း သူကိုယ်တိုင် တစ်ညလုံး ကားဆက်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ တစ်ညလုံးအလုပ်ပင်ပန်းသောကြောင့် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေသော ဒွေးကို ဇနီးဖြစ်သူက မနှိုးရက်ဘဲ ဆိုင်ကိုခဏသွားလေသည်။
ယောကျာ်း၏ ရှုတင်နီးနေပြီဖြစ်သောကြောင့် အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့ရာ အိမ် ရောက်တော့ ကိုသားကြီးက မှောက်လျက်ကြီး အိပ်နေလေသည်။ လက်ကိုကိုင်ပြီးလှုပ်နိူးတာ မရတဲ့အတွက် မသင်္ကာ၍ စိတ်ပူပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ကိုယ်တိုင်ကားမောင်း၍ ရွှေဂုံတိုင် အထူးကုဆေးခန်းကို သွားပေမယ့် သေပြီဆိုတဲ့ အတည်ပြုချက်သာ ရလိုက်သည်။
ထို့ကြောင့် ကိုသားကြီးကို ပြန်သယ်လာခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကျော်သူကိုယ်တိုင် ကားမောင်း၍ ရေဝေးအအေးတိုက်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဇူလှိုင် ၁၃ရက် မနက် ၄နာရီမှာ နေအိမ်တွင် ပင့်သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်များထံမှ သီလခံယူကာ ရေစက်ချအမျှဝေခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် မနက် ၅း၀၀ နာရီတွင် ရေဝေးအအေးတိုက် မှတစ်ဆင့် ရေဝေးသုဿန်တွင် မီးသဂြိုဟ်ခဲ့ရာ ချောင်းဝ ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်ကြွရောက်ကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒွေးရဲ့ အနုပညာမောင်နှမများဖြစ်တဲ့ နန္ဒာလိူင်၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ စိုးမြတ်နန္ဒာ၊ ပုလဲဝင်း၊ ဆုရွှန်းလဲ့၊ မေနန်းခေါင်၊ မေထွဋ်ခေါင်၊ သက်မွန်မြင့်၊ အေးဝတ်ရည်သောင်း၊ နှင်းဝတ်ရည်သောင်း၊ မောင်မျိုးမင်း၊ ခိုင်သင်းကြည်၏ခင်ပွန်း ကိုခန့်နိုင်နှင့် မိခင်ကြီး၊ ဒါရိုက်တာမောင်ဗေဒါ၊ နွဲ့နွဲ့စန်းနှင့် အမေများအဖွဲ့၊ စိုင်းစိုင်းခမ်းလိူင် နှင့် အခြားအနုပညာသည်များကလည်း ဝမ်းနည်းပူဆွေးစွာဖြင့် ဒွေး၏နောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်ပါပို့ဆောင်ကြပါတယ်။ မိုးမိုး၏ ယောကျာ်းအတွက် အသည်းပုံလွမ်းသူပန်းခွေ၊ မျိုးကြီးရဲ့ D ပုံစံလွမ်းသူပန်းခွေ၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ ဒါဒါ၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ ဖိုးကျော်၊ နှင့် ရုပ်ရှင်လောကရော၊ ဂီတလောက ကပါပို့ပေးထားတဲ့ ပန်းစည်းတွေ၊ ပန်းခြင်းတွေ၊ မိတ်ဆွေများရဲ့ ပန်းခြင်းတွေကလည်း မျက်စိတဆုံး များပြားလှပါတယ်။ အားလုံးရဲ့ ဝမ်းနဲပူဆွေးမှု၊ နှမြောတသ ယူကျုံးမရမှု၊ မယုံကြည်မှုတွေက ဒွေးပျောက်ကွယ်ပြီး မိုးခိုးငွေ့ ဖြစ်သွားတဲ့အထိ ကျန်ရှိနေစဲပါ။ ကိုသားကြီးကတော့ မသိနိုင်ရှာတော့ပဲ သူချစ်တဲ့မိသားစု၊ သူ့ကိုချစ်တဲ့ သူ့ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးတွေကို ထားခဲ့ကာ စောစီးစွာ နှုတ်မဆက်ပဲ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒွေး၏အရိုးပြာကို ပြန်လည်သယ်ဆောင်လာပြီး ချောင်းဝဘုန်းကြီးကျောင်း၌ လွမ်းစေတီတည်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ဇူလိုင် ၁၇ ရက်တွင်၊ ဒွေးသေဆုံးခြင်း တစ်ပတ်ပြည့် ရက်လည်အတွက် မစ္စိမာရုံကျောင်း ဆရာတော်အား ဆွမ်းကျွေးးပြီး ရေစက်ချ အမျှပေးဝေခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် မည်သူမဆို ဝင်ရောက်စားနိုင်ပြီး၊ ဒွေး နောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ အလှဓါတ်ပုံများကို အမှတ်တရ ဝေပေးခဲ့ရာ ပုံပေါင်း (၄၀၀၀၀) ကျော်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုသားကြီး (ခ) ဒွေး၏ ပုံတူ ရုပ်ထုနှင့် သူရရှိခဲ့သော အကယ်ဒမီရွှေစင်ဆုကို သူဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့သော ချောင်းဝဘုန်းကြီးကျောင်းရှိ အကယ်ဒမီကျောင်း၌ အမှတ်တရထားရှိထားပါတယ်။
ကိုသားကြီးရဲ့ နောက်ဆုံးရိုက်လက်စ ကားလေးက ဒါရိုက်တာ ချိုတူးဇော် ရိုက်တဲ့ `ကမ္ဘာတစ်ခြမ်းည´ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ။ ဒီကားထဲမှာ ကိုသားကြီး၊ မတင့်၊ ဆုရွှန်းလဲ့ တို့ ပါဝင်ပြီး ဒီကားလေးကို အဆုံးမသတ်ခင် သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက် အားလုံးက စိတ်မကောင်းကြီးစွာ ကရုဏာ ဖြစ်ကြရပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထို့အပြင် ရိုက်ရန်ကမ်းလှမ်းထားသော ကားများလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ညီဖြစ်သူ သားညီနဲ့လည်း အခွေထုတ်ကြဖို့ စီစဉ်နေတုန်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ သူ၏ ဆန္ဒတွေ အကောင်အထည် မဖော်ရသေးခင်အချိန်၊ သူရဲ့ ပရိတ်သတ်များကို အနုပညာဖြင့် ပေးဆပ်ရင်း၊ အနုပညာလုပ်ငန်းကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ကိုင်ရင်း အားလုံးကို စောစီးစွာ ကျောခိုင်းသွားပါတယ်။ လင်းလက်နေတဲ့ ပြည်သူချစ်တဲ့ အနုပညာ ကြယ်တစ်ပွင့် ကြွေကျသွားခဲ့ရပါတယ်။
ဒွေး မကွယ်လွန်ခင် ဆွဲခဲ့သော ပန်းချီလက်ရာများအား ဒွေးကွယ်လွန်သည့် (၂)နှစ်ပြည့် အမှတ်တရအဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ ၃၄ လမ်းရှိ Azada ခန်းမ၌ ၂၀၀၉ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ၅ ရက် ပြသရောင်းချသည်။ ဒွေး၏ လက်ရာ ၁၁ ကားရှိပြီး ရသည့်ငွေကို စာနယ်ဇင်း ရန်ပုံငွေအဖြစ် လှူဒါန်းသွားသည်။
ဒှေးသညျ ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ၊ အဆိုတျော တဈဦးအဖွဈ ပရိသတျအသိအမှတျပွု ခံရသူဖွဈသညျ။ ဒှေးကို အဖ ဦးတငျထှနျးမောငျနှငျ့ အမိ ဒျေါအေးအေးသငျးတို့ ရနျကုနျမွို့တှငျ မှေးဖှားပွီး မှေးခငျြးမြားအနကျ သားဦး ဖွဈသညျ။ အမညျရငျးမှာ ထငျလငျး (ခ) သားကွီး ဖွဈသညျ။ ထငျလငျး (ချေါ) ဒှေးသညျ Y.I.T မှ အငျဂြီနီယာဘှဲ့ရထားသူ တဈယောကျ ဖွဈသညျ။ စကျမှုအငျဂငျြနီယာတဈယောကျ ဖွဈသော ဒှေးသညျ ဘှဲ့မရခငျကတညျးက အနုပညာလောကထဲသို့ စတငျအခွခေခြဲ့သညျ။ သရုပျဆောငျလောကထဲသို့ မဝငျမီက အဆိုတျော ဖွဈခငျြခဲ့ပါသညျ။ မမြှျောလငျ့ပဲ ဦးလေးဖွဈသူ ဦးကြျောဟိနျးကွောငျ့ ရုပျရှငျရိုကျ ဖွဈခဲ့ပါသညျ။ ရုပျရှငျလောကထဲကို နာမညျရငျး ထငျလငျးအမညျနှငျ့ ပထမဆုံး ဝငျရိုကျခဲ့ပွီး နောကျပိုငျးတှငျ ဒှေးအမညျသို့ပွောငျးကာ ၁၉၉၃ ခုနှဈတှငျ ဒါရိုကျတာ ကြျောဟိနျး၏ ဒုက်ခကို အရောငျဆိုးတယျ အမညျရှိ မူးယဈဆေးဝါးပညာပေး ဗီဒီယိုကားနှငျ့ ဝလေညျးမှေး၊ ကွှလေညျးမှေး ရုပျရှငျကားမှာ ပရိတျသတျအသိမြားပွီး စတငျအောငျမွငျခဲ့သညျ။
ဒှေးသညျ ဦးလေးဖွဈသူ အကယျဒမီ ကြျောဟိနျး၏ လမျးညှနျ ဆှဲချေါမှုကွောငျ့ ရုပျရှငျလောကထဲမှာ အောငျမွငျခဲ့သညျ။ ဗီဒီယိုကားပေါငျးမြားစှာနှငျ့ ရုပျရှငျကားပေါငျးမြားစှာ ရိုကျကူးခဲ့သော စူပါမငျးသား တဈယောကျဖွဈလာခဲ့သညျ။ ဒှေးသညျ ၁၉၉၇-ခုနှဈတှငျ အမခွေ့ရောဇာတျကားတှငျ အမြိုးသားဇာတျဆောငျဆု အကယျဒမီရရှိခဲ့သညျ။ ရုပျရှငျကွီးပေါငျးမြားစှာ၊ ဗီဒီယို ကားပေါငျးမြားစှာ၊ ကွျောငွာမြားကိုလညျး ရိုကျကူးခဲ့ပါသညျ။ ထိုသို့ ရုပျရှငျလောကတှငျ လြှမျးလြှမျးတောကျ အောငျမွငျခဲ့သလို င်ျဂီတလောကတှငျလညျး အောငျမွငျနသေူ တဈယောကျဖွဈသညျ။ သီခငျြးပါငျး အပုဒျ ၃၀ကြျော ကို သီဆိုခဲ့သညျ။
ဒှေးကိုယျတိုငျ ဒါရိုကျတာအဖွဈ နောကျဆုံးရိုကျကူးခဲ့သောကားမှာ `နှငျးဆီမိုးတိမျ´ဖွဈသညျ။
အောငျမွငျနခြေိနျတှငျ အကယျဒမီ ဒှေးသညျ မမြှျောလငျ့ဘဲ နှလုံးရောဂါနှငျ့ ၂၀၀၇ခု၊ ဇူလိုငျ ၁၁ ရကျ (ဗုဒ်ဓဟူးနေ့) တှငျ ညနေ (၅) နာရီ၌၊အမှတျ (၃၄) (စီ)၊ အေးသာယာလမျး၊ ဘောကျထျော နအေိမျတှငျ ရုတျတရကျ ကှယျလှနျသှားခဲ့လသေညျ။ ကှယျလှနျခြိနျတှငျ ဒှေးသညျ အသကျ (၄၂) နှဈရှိပွီ ဖွဈသညျ။
၁၈ နှဈကွာပေါငျးသငျးခဲ့သော ခဈြလှစှာသောဇနီးသညျ မိုးမိုးနှငျ့ မှေးစားသား ဝယေံမိုးတို့ကို ထားခဲ့ပွီး မပွနျလာနိုငျတော့တဲ့ လမျးကိုစောစီးစှာ လြှောကျလှမျးသှားခဲ့သညျ။ ဇူလိုငျလ (၁၀) ရကျနေ့ မှာကရြောကျတဲ့ ဇနီးသညျ မမိုးမိုး၏ မှေးနအေ့ပွီး နောကျတဈရကျတှငျ သဆေုံးသှားခွငျးဖွဈပါတယျ။ သူ၏ခဈြဇနီး မိုးမိုး၏မှေးနအေ့တှကျ မှေးနလေ့ကျဆောငျအဖွဈ ဘယျတော့မှမသတေဲ့ အခဈြသဈပငျလေးနှငျ့ ဘီဒိုသုံးလုံးကို လကျဆောငျအဖွဈပေးခဲ့ပါသေးတယျ။ မကှယျလှနျမီ တဈရကျက တဈနလေုံ့းကားရိုကျပွီး ညဘကျပွနျရောကျတဲ့ အခါမှာလညျး သူကိုယျတိုငျ တဈညလုံး ကားဆကျတဲ့အလုပျကို လုပျနခေဲ့ပါတယျ။ တဈညလုံးအလုပျပငျပနျးသောကွောငျ့ နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ အိပျပြျောနသေော ဒှေးကို ဇနီးဖွဈသူက မနှိုးရကျဘဲ ဆိုငျကိုခဏသှားလသေညျ။
ယောကျြား၏ ရှုတငျနီးနပွေီဖွဈသောကွောငျ့ အိမျသို့ပွနျလာခဲ့ရာ အိမျ ရောကျတော့ ကိုသားကွီးက မှောကျလကျြကွီး အိပျနလေသေညျ။ လကျကိုကိုငျပွီးလှုပျနိူးတာ မရတဲ့အတှကျ မသင်ျကာ၍ စိတျပူပွီး ခငျပှနျးဖွဈသူကို ကိုယျတိုငျကားမောငျး၍ ရှဂေုံတိုငျ အထူးကုဆေးခနျးကို သှားပမေယျ့ သပွေီဆိုတဲ့ အတညျပွုခကျြသာ ရလိုကျသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ကိုသားကွီးကို ပွနျသယျလာခဲ့ပွီး ရုပျရှငျသရုပျဆောငျ ကြျောသူကိုယျတိုငျ ကားမောငျး၍ ရဝေေးအအေးတိုကျသို့ ပို့ဆောငျခဲ့ပါသညျ။ ဇူလှိုငျ ၁၃ရကျ မနကျ ၄နာရီမှာ နအေိမျတှငျ ပငျ့သံဃာတျော အရှငျသူမွတျမြားထံမှ သီလခံယူကာ ရစေကျခအြမြှဝခေဲ့ပါတယျ။
ထို့နောကျ မနကျ ၅း၀၀ နာရီတှငျ ရဝေေးအအေးတိုကျ မှတဈဆငျ့ ရဝေေးသုဿနျတှငျ မီးသဂွိုဟျခဲ့ရာ ခြောငျးဝ ဆရာတျောဘုရားကွီးကိုယျတိုငျကွှရောကျကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ ဒှေးရဲ့ အနုပညာမောငျနှမမြားဖွဈတဲ့ နန်ဒာလိူငျ၊ အိန်ဒွာကြျောဇငျ၊ စိုးမွတျနန်ဒာ၊ ပုလဲဝငျး၊ ဆုရှနျးလဲ့၊ မနေနျးခေါငျ၊ မထှေဋျခေါငျ၊ သကျမှနျမွငျ့၊ အေးဝတျရညျသောငျး၊ နှငျးဝတျရညျသောငျး၊ မောငျမြိုးမငျး၊ ခိုငျသငျးကွညျ၏ခငျပှနျး ကိုခနျ့နိုငျနှငျ့ မိခငျကွီး၊ ဒါရိုကျတာမောငျဗဒေါ၊ နှဲ့နှဲ့စနျးနှငျ့ အမမြေားအဖှဲ့၊ စိုငျးစိုငျးခမျးလိူငျ နှငျ့ အခွားအနုပညာသညျမြားကလညျး ဝမျးနညျးပူဆှေးစှာဖွငျ့ ဒှေး၏နောကျဆုံးခရီးကို လိုကျပါပို့ဆောငျကွပါတယျ။ မိုးမိုး၏ ယောကျြားအတှကျ အသညျးပုံလှမျးသူပနျးခှေ၊ မြိုးကွီးရဲ့ D ပုံစံလှမျးသူပနျးခှေ၊ အိန်ဒွာကြျောဇငျ၊ ဒါဒါ၊ စိုးမွတျသူဇာ၊ ဖိုးကြျော၊ နှငျ့ ရုပျရှငျလောကရော၊ ဂီတလောက ကပါပို့ပေးထားတဲ့ ပနျးစညျးတှေ၊ ပနျးခွငျးတှေ၊ မိတျဆှမြေားရဲ့ ပနျးခွငျးတှကေလညျး မကျြစိတဆုံး မြားပွားလှပါတယျ။ အားလုံးရဲ့ ဝမျးနဲပူဆှေးမှု၊ နှမွောတသ ယူကြုံးမရမှု၊ မယုံကွညျမှုတှကေ ဒှေးပြောကျကှယျပွီး မိုးခိုးငှေ့ ဖွဈသှားတဲ့အထိ ကနျြရှိနစေဲပါ။ ကိုသားကွီးကတော့ မသိနိုငျရှာတော့ပဲ သူခဈြတဲ့မိသားစု၊ သူ့ကိုခဈြတဲ့ သူ့ခဈြပရိတျသတျကွီးတှကေို ထားခဲ့ကာ စောစီးစှာ နှုတျမဆကျပဲ ထှကျခှာသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒှေး၏အရိုးပွာကို ပွနျလညျသယျဆောငျလာပွီး ခြောငျးဝဘုနျးကွီးကြောငျး၌ လှမျးစတေီတညျဖို့ ရညျရှယျထားပါတယျ။ ဇူလိုငျ ၁၇ ရကျတှငျ၊ ဒှေးသဆေုံးခွငျး တဈပတျပွညျ့ ရကျလညျအတှကျ မစ်စိမာရုံကြောငျး ဆရာတျောအား ဆှမျးကြှေးးပွီး ရစေကျခြ အမြှပေးဝခေဲ့ပါတယျ။ ထို့အပွငျ မညျသူမဆို ဝငျရောကျစားနိုငျပွီး၊ ဒှေး နောကျဆုံးရိုကျခဲ့တဲ့ အလှဓါတျပုံမြားကို အမှတျတရ ဝပေေးခဲ့ရာ ပုံပေါငျး (၄၀၀၀၀) ကြျောခဲ့ပါတယျ။
ကိုသားကွီး (ခ) ဒှေး၏ ပုံတူ ရုပျထုနှငျ့ သူရရှိခဲ့သော အကယျဒမီရှစေငျဆုကို သူဆောကျလုပျလှူဒါနျးခဲ့သော ခြောငျးဝဘုနျးကွီးကြောငျးရှိ အကယျဒမီကြောငျး၌ အမှတျတရထားရှိထားပါတယျ။
ကိုသားကွီးရဲ့ နောကျဆုံးရိုကျလကျစ ကားလေးက ဒါရိုကျတာ ခြိုတူးဇျော ရိုကျတဲ့ `ကမ်ဘာတဈခွမျးည´ဆိုတဲ့ ဇာတျကားလေးပါ။ ဒီကားထဲမှာ ကိုသားကွီး၊ မတငျ့၊ ဆုရှနျးလဲ့ တို့ ပါဝငျပွီး ဒီကားလေးကို အဆုံးမသတျခငျ သဆေုံးသှားခဲ့တဲ့အတှကျ အားလုံးက စိတျမကောငျးကွီးစှာ ကရုဏာ ဖွဈကွရပါတယျလို့ သိရပါတယျ။ ထို့အပွငျ ရိုကျရနျကမျးလှမျးထားသော ကားမြားလညျး ရှိပါသေးတယျ။ ညီဖွဈသူ သားညီနဲ့လညျး အခှထေုတျကွဖို့ စီစဉျနတေုနျးဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။ သူ၏ ဆန်ဒတှေ အကောငျအထညျ မဖျောရသေးခငျအခြိနျ၊ သူရဲ့ ပရိတျသတျမြားကို အနုပညာဖွငျ့ ပေးဆပျရငျး၊ အနုပညာလုပျငနျးကို တစိုကျမတျမတျလုပျကိုငျရငျး အားလုံးကို စောစီးစှာ ကြောခိုငျးသှားပါတယျ။ လငျးလကျနတေဲ့ ပွညျသူခဈြတဲ့ အနုပညာ ကွယျတဈပှငျ့ ကွှကေသြှားခဲ့ရပါတယျ။